कसैसँग हाम्रो कथा सुन्ने धैर्य छैन ! - Baikalpikkhabar
कसैसँग हाम्रो कथा सुन्ने धैर्य छैन !
नयाँ शक्ति पार्टीका काठमाडौं संयोजक मानुषी यमी भट्टराई
मि टू अर्थात् म पनि । आफूले भोगेका यौन हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका घटना बाहिर ल्याउन महिलालाई प्रेरणा र साहस दिने यो अभियान अहिले नेपालमा पनि चलिरहेको छ ।
सुरुमा रस्मीला प्रजापति र उज्ज्वला महर्जनले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने काठमाडौंका पूर्व मेयर केशव स्थापितको नाम सार्वजनिक गरे । उनीहरूले पहिले पनि आफ्नो? पीडा प्रकट गरेका रहेछन् । तर, त्यसबेला उनीहरूको कुरा सुन्ने–बुझ्ने कोही भइदिइएन । मि टूका कारण यसपालि भने उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले चर्चा पायो ।
पत्रकार सुविना श्रेष्ठ, पूर्व पत्रकार मीना कैनी र आकांक्षा कार्कीलगायतले पनि आफूमाथि र आफ्नो कार्यालयभित्र भएका यौन दुर्व्यवहारका घटना बाहिर ल्याए । तर, उनीहरूले आफ्ना पीडकको नाउँ सार्वजनिक गरेनन् ।
मि टू अभियानले हलचल चाहिँ त्यो बेला ल्यायो, जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र–मानवशास्त्र विभागका पूर्व प्राध्यापक एवं जनजाति आन्दोलनका चर्चित अगुवा कृष्ण भट्टचनको नाउँ समेत यसमा मुछियो ।
सुरुमा भट्टचनको नाउँ गोप्य नै थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन छात्राले केबल एक प्राध्यापकले थेसिसको बहानामा घर बोलाएर आफूहरूको इच्छाविपरीत आफूहरूलाई छुने, पेन ड्राइभमा सुटुक्कै अश्लिल भिडियो हालिदिने र कुराकानीमा अश्लिल शब्द प्रयोग गर्ने जस्ता बिवरणहरू मात्रै बाहिर ल्याएका थिए ।
ती तीन छात्रा समाजका प्रतिष्ठित भनाउँदा ब्यक्तिविरुद्ध अगाडि आइहाल्ने अवस्था नरहनु अस्वभाविक थिएन । ममाथि यौन हिंसा–अन्याय भयो भनेर सहानुभुति पाउने अवस्था नेपाली समाजमा अझै नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । हामीले नयाँ शक्ति पार्टीका तर्फबाट त्यो घटनामा हस्तक्षेप गर्ने कोशिस नगरेको होइन, तर उनीहरू त्यसबेला पीडकको नाउँ सार्वजनिक गर्न मानसिक रुपमा तयार थिएनन् । हामीले कर गर्नु पनि उचित ठानेनौँ ।
महिलाहरूले भोग्ने यौन हिंसा र दुर्व्यवहारका विभिन्न आयामहरू हुन्छन् । बलात्कारको घटनाले धेरै चर्चा पाउँछ । पीडितले सहानुभूति र समर्थन पनि पाउँछ । तर, महिलाले घरभित्रै पनि हिंसा भोगिरहेका हुन्छन्, जुन हत्तपत्त बाहिर आउँदैन । त्यस्ता घटना पुष्टि गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। कानूनलाई प्रमाण चाहिन्छ । तर, घरभित्रै हुने वा अन्य प्रकारका यौन हिंसाका घटनामा प्रमाण जुटाउनु अत्यन्तै मुश्किल पर्छ । यो जान्दाजान्दै पनि आफूले भोगेका पीडा बाहिर ल्याउने महिलाहरू वास्तवमै साहसी हुन्। यस्तो साहस जुटाउने महिलालाई साथ दिनु सबैको कर्तव्य हो ।
मि टू कुनै संगठित आन्दोलन होइन । यो कसैको नियन्त्रणमा पनि छैन, न त कोहीद्वारा निर्दे्शित नै । हामी आन्दोलन भन्ने बित्तिकै सडक प्रदर्शनलाई बुझ्छौँ । मि टू फरक आन्दोलन हो । यसका आन्दोलनकारीहरू सडकमा आउँदैनन् । उनीहरूलाई जोश भन्दा पनि साहस र नैतिक बल आवश्यक पर्छ ।
अरु आन्दोलन सडकमा हुन्छ । मि टू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ । अहिले नेपालमा ९५ लाखभन्दा बढी मानिस फेसबुकमा छन् । झण्डै २३ लाखले ट्वीटर र ३८ लाखभन्दा बढीले यूट्यूब चलाउँछन् । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको यो युगमा महिला आन्दोलनको स्वरुप पनि परिवर्तन भएको छ।
मेरा बुबा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला म पनि उहाँसँगै बालुवाटार बस्थेँ । त्यसबेला म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु सचिव पनि थिएँ ।
म माइक्रो बस चढेर कीर्तिपुर जान्थेँ । मलाई तीन पुरुषहरू सधैं पछ्याउँथे । सँगै होइन, छुट्टाछुट्टै । माइक्रो बसदेखि लिएर क्याम्पस परिसर, स्ववियुको कार्यालय हुँदै बालुवाटारसम्मै पछ्याउँथे । अश्लिल म्यासेजहरू पठाउँथे । मध्यराति दुई–तीन बजेतिर पनि फोन गर्थे ।
एक जना होइन, दुई जना होइन, तीन जनासँग कसरी डिल गर्ने रु यस्तो बेला हामी महिलाले अपनाउने सबैभन्दा सजिलो प्रतिरोधको उपाय भनेको तिनको नम्बर ब्लक गर्नु नै हो ।
तर, नम्बर ब्लक गरेर पनि त्यस्तो समस्यालाई पन्छाउन नसकिने रहेछ । उनीहरू फेरि अर्को नम्बरबाट फोन गरी सताउन थाल्दा रहेछन् । अरु के उपाय अपनाउनु त रु त्यसबेला के गर्ने, कसो गर्ने हुँदो रहेछ । त्यसबेला मलाई राति निद्रा लाग्दैन थियो । कतिबेला कसले फोन गरेर के भन्ने हो भन्ने भय मनमा भइरहन्थ्यो । स्ववियु बैठक चलिरहेकै बेला मलाई यस्ता सन्देशहरू आउँथे । म तिनलाई बेवास्ता गर्न खोज्थे । तर, यस्ता विषयमा सोच्दै सोच्दिनँ भनेर पन्छिन खोजे पनि नसकिँदो रहेछ ।
मैले आफैसँग सोधेँ – किन मलाई यस्तो भइरहेको छ ? किन उनीहरू मलाई पछ्याउँछन् ? एक महिला विद्यार्थी राजनीतिक अग्रपंक्तिमा आएको तिनले पचाउन नसकेको हो ? के त्यही कारणले पाइला पाइलामा मलाई बाधा पुर्‍याउन खोजेको हो ?
आफूले भोगिरहेका समस्याबारे मैले खुलेर बोल्न सकिनँ । आफ्नो संगठनभित्र यो कुरा नराखेको होइन, तर सबै गलल हाँस्थे । मेरो पीडालाई मजाक बनाउँथे । मलाई पिछा गर्नेहरू हाम्रै केन्द्रीय कार्यालयसम्म आउँथे । हाम्रै नेताहरू तिनलाई सोफामा राखेर मजाले गफ गर्थे । नेताहरूलाई थाहा थियो, तिनले मलाई अनावश्यक दुःख दिँदैछन् भन्ने । तर, उनीहरूले मेरो मर्म बुझेनन् ।
प्रधानमन्त्रीकै छोरी हुँदा त मैले यस्तो सहनु परेको थियो भने अरु महिलाको हालत के होला रु मसँग एक प्रहरी पनि हिंड्थे । तर, उनको केही लागेन । अति नै भएपछि मैले प्रहरीको हनुमानढोका स्थित साइबर अपराध शाखामा उजुरी दिए ।
त्यसको प्रतिक्रिया हाम्रो समाजले कसरी दियो होला भन्ने अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ?
उजुरी गरेको भोलिपल्ट मलाई पत्रकारको फोन आयो । अनि, पहिलो पेजमा समाचार आयो – प्रधानमन्त्री पुत्रीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्दा थुनामा । हाम्रो समाजले दिने प्रतिक्रिया यही हो ।
मलाई लाग्छ – हाम्रो कथा सुन्ने धेर्य हाम्रो समाजसँग छैन । हाम्रो कथा सुन्नुअघि नै हाम्रो समाजका अधिकांश सदस्यको मस्तिष्कमा अर्कै धारणा बनिसकेको हुन्छ । उनीहरू त्यही नजरबाट हाम्रो कथालाई हेर्छन् ।
तैपनि, मिटू अभियानले एक किसिमको चेतना भने पक्कै ल्याएको छ । आफूले भोगेका हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका घटना दबाउनुको सट्टा त्यसलाई बाहिर ल्याएर पीडकको सामना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना यो अभियानले धेरै महिलालाई दिएको छ ।
(अन्तर्रा्ष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नयाँ शक्ति पार्टीद्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो पार्टीका काठमाडौं संयोजक मानुषी यमी भट्टराईद्वारा व्यक्त विचार एवं अनुभवको सम्पादित स्वरुप) काठमाण्डौं प्रेसबाट
मङ्गलबार, २८ फागुन, २०७५, बिहानको ०९:०२ बजे